अंगि`कृत नागरिकताका विषयमा ओली सरकारले क डा नि र्णय गर्दै !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अंगि`कृत नागरिकताका विषयमा ओली सरकारले क डा नि र्णय गर्दै !!
काठमाडौं । नेपालको अति`क्रमित भूमी पनि समेटेर जारी भएको नक्सा सहितको निसान छाप प्रतिनिधि सभावाट पारित भएसंगै सरकार अब नागरिकताको विषयमा पनि क डा हुने सं केत देखाएको छ । अंगि कृत नागरिकका विषयमा सरकार कडा हुन लागेको सं केत देखिएको हो ।
नेपाली नागरिक संग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले अब ७ वर्ष पछि मात्र अंगि कृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था गर्न प्रति`निधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव पेश भएको छ । विवाह भए लगत्तै आवासीय अनुमति र आथिक, सामाजिक र सांस्कृत अधिकार उपभोग भने गर्न दिइने प्रस्ताव पेश भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचारा धीन थियो । अंगि`कृत नागरिकता लिएर राजनीति गरेर सांसद बनेकी सरिता गिरीले सार्वजनिक गरेका राष्ट्रिय`ता सम्बन्धि भनाईका कारण सरकार अंगि कृत नागरिकताका विषयमा सम्बेदनशिल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सांसद गिरीले नेपालको राष्ट्रियता विरोधी अभिब्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जारी छ । अंगि कृत नागरिकता लिएकाहरुलाई तत्काल राजनीतिक अधिकार दिँदा राष्ट्रियता ख तरामा पर्ने आवाज सामाजिक सञ्जा लमा उठिरहेको छ ।लामो समय देखि सहमति जु ट्न नसकेको यो विषयमा अहिले सत्ताधारी नेकपाका नेताहरुले नै चासो देखाए पछि प्रस्ताव आएको हो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन समितिका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठलाई सुझाव दिएपछि छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ । संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियस भाबाट पनि पास भइस`केको छ ।